Site na: KongoLisolona: November 9, 2019 00: 55 Enweghị asịsa
Ọ bụrụgodi na ụdị ihe otiti a adịla ọtụtụ afọ, ịmara na ọ na-abawanye naanị na Africa, na Europe, na ọbụna na United States. Ọ bụghị naanị na ọ na-emetụta nwanyi ...	GỤKWUO
Mgbakwunye na ngwaahịa na-egbuke egbuke: ngwaahịa na-egbuke egbuke na-ebibi ọrịa nke ọtụtụ ndị ji ha, karịsịa Black / African ... (VIDIO)
Site na: Admi1na: March 18, 2019 03: 30 Enweghị asịsa
N'ihi ike aghụghọ nke mgbasa ozi, ngwaahịa ịgbanwe agba na-emetụta ọdịmma nke ndị ọrụ ha. Mụnnem ndị isi ojii / ndị Africa, kwụsịnụ iji ...	GỤKWUO
Ịgba akwụmụgwọ na-eme ka ị nwee mkpa nke na-emecha na-egbuchasị akpụkpọ ahụ gị ma mee ka ị nọ n'okpuru ya mgbe ị na-eme ya
Site na: KongoLisolona: Disemba 4, 2018 07: 12 Enweghị asịsa
Nke ka njọ bụ na mkpụrụ ọgwụ na-egbu egbu riri ahụ gị, maka ndụ "N'ezie, gịnị bụụrụ ndị Blacks / ndị Africa? »... Adịghị ike na mmụọ! Site, KL	GỤKWUO
Mmebi anụ ahụ abụghị egwuregwu, ọ na-emebi akpụkpọ ahụ na ndụ: kwụsịrị, "Tchoko" mbibi nke anụ ahụ, biko ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: November 18, 2018 14: 39 Enweghị asịsa
N’ikwu eziokwu, olee otu ị ga - esi kpọọ onwe gị asị na nke a: mgbe nke a gasịrị, mgbe ị ga - anwụ n’ọrịa kansa, ị ka ga - eme “ndị nne na nna gị ndị amoosu ebubo”.	GỤKWUO
Site na: Admi1na: November 18, 2018 13: 11 Enweghị asịsa
Inwe mgbagwoju anya bụ ọchịchọ nke ụfọdụ ndị nzuzu ojii / Afrịka. N'Africa, ihe eji eme ihe a nwere ihe di egwu, n'ihi na ihe ndi a nwere ihe di iche iche ...	GỤKWUO
Uche nzuzu nke agbụrụ ojii: ọ chọrọ ịghọ nwanyi ọcha, mana ebe a bụ ihe nsonaazụ a
Site na: KongoLisolona: November 18, 2018 12: 03 Enweghị asịsa
Nwee obi ụtọ n'ihe Chineke nyere gị. O kere gị n’onyinyo ya ma ọ bụghị ụcha akpụkpọ ahụ na-akọwa gị. Ma ihe kachasị gị mkpa bụ obi gị na ...	GỤKWUO
Aug13 12: 57